Isikhungo Sase-Afrika Sokugcinwa Komlando Wezinto Eziphilayo - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Isikhungo sase-Afrika Sokuhlukahluka Kwemvelo
UBill Gates akanamahloni ngokuthanda kwakhe umanyolo wokwenziwa, njengoba yena kuchaza kule blog ukukhipha isitshalo sokusabalalisa umanyolo i-Yara eTanzania. UGates uchaza umanyolo wokwenziwa “njengento eyenziwe ngomlingo engasiza ukukhipha izigidi zabantu ebuphofini.”
ICorp Watch ichaza uYara ngokuthi “umanyolo omkhulu odala inhlekelele yesimo sezulu. ” I-Yara ingumthengi omkhulu wezimboni waseYurophu omkhulu wegesi yemvelo, enxenxa ngenkuthalo ukuthosa, futhi ingumkhiqizi ophambili womanyolo wokwenziwa ososayensi bathi banesibopho ngoba ukukhathazeka kuyanda ekukhishweni kwe-nitrous oxide, a igesi yokushisa okunamandla okuphindwe izikhathi ezingama-300 kune-carbon dioxide ekufudumaleni kweplanethi.
Ngokombiko othile iphepha le-Nature lakamuva, ukukhishwa kwe-nitrous oxide okuqhutshwa kakhulu ezolimo kuyanda ngokwanda kwempendulo yempendulo okusibeka ku-a indlela embi kakhulu yokushintsha kwesimo sezulu.
IGates Foundation isebenzise ngaphezulu kwe- $ 4 billion kusukela ngo-2006 ukuze "sisize ekuqhubeni uguquko kwezolimo”E-Afrika. Ubuningi be- imali iya ku ucwaningo lobuchwepheshe kanye nemizamo yokuguqula abalimi base-Afrika basebenzise izindlela zezimboni zezolimo futhi bandise ukufinyelela kwabo ezimbewini zentengiso, umanyolo nokunye okokufaka. Abaxhasi bathi le mizamo nika abalimi izinqumo abazidingayo ukukhulisa ukukhiqizwa futhi bazikhuphule ebuphofini.
Abagxeki bathi "inguquko eluhlaza" amasu alimaza i-Afrika ngokwenza izimiso zemvelo zintekenteke kakhudlwana, ukufaka abalimi ezikweletini, Futhi ukuphambukisela izinsiza zomphakathi kude kusukela izinguquko ezijulile zesistimu kwakudingeka ukubhekana nesimo sezulu kanye nezinkinga zendlala.
"IGates Foundation igqugquzela uhlobo lokulima ngohlobo olulodwa lwezimboni nokulungiswa kokudla okungabondli abantu bethu," iqembu labaholi bezenkolo base-Afrika wabhala encwadini ukuwa kokugcina, kuphakamisa ukukhathazeka ngokuthi isisekelo "sokwesekwa kokunwetshwa kwezolimo olunzulu lwezimboni sijulisa inkinga yabantu."
I-AGRA isebenzise imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 524, ikakhulukazi ezinhlelweni zokwandisa ukufinyelela kwabalimi ezimbewini zentengiso nakumanyolo. Le phakethe yezobuchwepheshe "yokuguqula okuluhlaza" iphinde ixhaswe ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane zamaRandi ngonyaka kwizibonelelo ezivela kohulumeni base-Afrika, ngokusho kuka ucwaningo olushicilelwe ngonyaka odlule by ITufts Global Development and Environment Institute kanye nombiko ohambisanayo Amaqembu ase-Afrika nawaseJalimane.
“Uma izinhlelo zomhlaba zokudla zizokwazi ukusimama, izindlela zokutshala ezisebenzisa kakhulu isivuno kanye nezindawo zokudla ezidayiswayo kumele zingasasebenzi, ”kubhala abaholi bezenkolo base-Afrika khalaza kwiGates Foundation.
Kepha izinhlelo zokukhulisa i-agroecology zilambele ukuthola imali njengoba izigidigidi zosizo nemixhaso izokwenyusa izindlela zezolimo zezimboni.
Izintandokazi zabanikeli zenzuzo, ezingahlehli kanye nemiphumela yesikhathi esifushane ibuyisela emuva ukutshalwa kwezimali kwi-agroecology ngokusho kombiko wango-2020 kusuka ku-International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). Ama-85% wamaphrojekthi we-Gates Foundation axhaswe yi-Afrika kule minyaka edlule anqunyelwe ekusekeleni ezolimo zezimboni, kusho umbiko, kuyilapho kuphela u-3% wamaphrojekthi afaka izinto zokuhlelwa kabusha kwe-agroecological.
Lezi zinketho zinesisindo esinzima ezinqumweni zokuthi amadola ocwaningo abiwa kanjani ezinhlelweni zokudla zomhlaba wonke. Umamukeli omkhulu kunabo bonke Imali yezolimo yeGates Foundation yi-CGIAR, inhlanganisela yezikhungo zocwaningo eziyi-15 eziqashe izinkulungwane zososayensi futhi ziphethe amabhange ayi-11 abaluleke kakhulu emhlabeni.
Eminyakeni yamuva nje, ezinye izikhungo ze-CGIAR zithathe izinyathelo zokubheka izindlela ezihlelekile nezisuselwa kumalungelo, kepha uhlelo oluhlongozwayo lokwakha kabusha i- "One CGIAR" enebhodi elilodwa namandla amasha wokusetha i-ajenda liphakamisa ukukhathazeka. Ngokusho kokudla kwe-IPES, isiphakamiso sokuhlelwa kabusha isongela "ukunciphisa ukuzimela kwama-ajenda ocwaningo lwesifunda futhi iqinise ukubamba kwabaxhasi abanamandla kakhulu," njengeGates Foundation, "enqena ukwehluka kumasu wenguquko oluhlaza."
Umlayezo wokuthatha uBill Gates incwadi entsha ukuthi intuthuko yezobuchwepheshe singondla umhlaba futhi silungise isimo sezulu, uma nje sikwazi tshala izinsiza ezanele ngalezi zinto ezintsha. Izinkampani ezinkulu zokubulala izinambuzane / imbewu zikhuthaza ingqikithi efanayo, ukuziphendulela kabusha kusuka kwabenqabayo besimo sezulu kuya ekuxazululeni izinkinga: ukuthuthuka kwezolimo ezidijithali, ukunemba kwezolimo kanye nobunjiniyela bezakhi zofuzo kuzonciphisa imvelo yezolimo futhi "kunike amandla abalimi abancane abayizigidi eziyikhulu" ukujwayela ukuguquguquka kwesimo sezulu, “konke ngonyaka ka-2030,” ngokusho kuka I-Bayer CropScience.
Sekuyiminyaka engama-30 imboni yamakhemikhali ithembisa ukuthi izitshalo ze-GMO zizothuthukisa isivuno, zinciphise izibulala-zinambuzane futhi zondle umhlaba ngokusimama, kepha akwenzekanga kanjalo. Njengoba uDanny Hakim abike ku New York Times, Izitshalo ze-GMO azange zikhiqize isivuno esingcono, futhi baqhuba ukusetshenziswa kwezibulala-khula, ikakhulukazi i-glyphosate, okuxhunyaniswe nomdlavuza phakathi kwezinye impilo nezinkinga zemvelo. Njengoba ukhula luba lukhuni, imboni yathuthukisa imbewu enokubekezelela okusha kwamakhemikhali. I-Bayer, isibonelo, iqhubekela phambili ngezitshalo ze-GMO yakhelwe ukusinda ukubulala ukhula okuyisihlanu.
UBill Gates Ukudla Tracker, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Isikhungo sase-Afrika Sokuhlukahluka Kwemvelo, i-agroecology, Bill Gates, CGIAR, isimo sezulu, AmaGates Foundation, GMO, ukuvuselela okuluhlaza okotshani, UMariam Mayet, URupa Marya, UStacy Malkan